Juventus oo bixineysa mid ka mid ah xiddigaheeda muhiimka ah iyo lacag si ay u hesho Pogba – Gool FM
(Italy) 08 Juunyo 2019. Sida ay maanta oo Sabti ah shaaca ka qaadeen wargeysyada, Juventus ayaa lagu soo waramayaa inay dooneyso in Paul Pogba ay ka iibsato kooxda Manchester United kaddib marka uu furmo suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
Sida laga soo xigtay wargeyska “CalcioMercato” ee dalka Talyaaniga kooxda Juventus ayaa diyaar u ah inay bixiso Paulo Dybala iyo lacag, si kaliya ay u hesho adeega xiddiga khadka dhexe reer France iyo kooxda Manchester United ee Paul Pogba.
Juventus ayaa dooneysa inay dib u soo ceshato xiddiga ku guuleysta Koobka Adduunka 2018 ee reer France Paul Pogba, si ay ugu buuxistaan khadkooda dhexe, maadaama ay doonayaan in si xoogan ay ugu tartamaan hanashada Champions League xili ciyaareedka soo socda.
Sida lagu daabacay warar hore weeraryahanka reer Argantina ee Paulo Dybala ayaan ku qanacsaneyn joogitaankiisa kooxda Juventus tan iyo markii uu yimid Cristiano Ronaldo, iyadoo sidoo kale uu warkan sheegay xitaa walaalka la dhashay Dybala.
Heshiiska Hazard ee kooxda Real Madrid oo farxad galiyay Klopp iyo kooxda Liverpool